Bloodroot Mnene. Ukutshala kanye Ukunakekela
Uma ngempela ufuna ukuhlobisa ingadi isitshalo sakho, okuyinto ukujabulisa iso unyaka wonke, kubalulekile ukuba banake imbali ezifana bloodroot. Ukutshala nokunakekela musa okungadala ubunzima ngisho balimi imfundamakhwela, futhi zonke izinto ezazikukhathaza bebakhohliwe uma bayokwazisa izimbali zayo ezincane kodwa amahle kakhulu. entwasahlobo cinquefoil flower embhedeni kuhlobisa izimila yayo aminyene, esikhathini kusuka July kuya ku-August sezihlahla embozwe emhlophe, pink izimbali ophuzi. Ekwindla isitshalo futhi enhle kakhulu, amaqabunga ayo ujike egolide, futhi ebusika ngenxa amahlumela ngesikele sokuthena iqhwa ukulunguza obomvu.
Uma ufuna ukuthola izimbali kanye flower kwendle kakhulu, kuyoba nje indlela bloodroot. Ukutshala nokunakekela isiphakamiso yokuthola indawo efanelekayo. On ukuthi kuyakuba kanjani yimpumelelo kuxhomeke ekutheni lesi sitshalo singagxila engadini yakho. Emvelweni, kukhona izinhlobo eziningi kakhulu imibala, basuke kubhekwe lapho kwazalelwa khona eMpumalanga Ekude, e-Europe kanye neNyakatho yeMelika. Njengoba bloodroot uthanda amanzi, likhula futhi kuba izindawo omnandi futhi manzi eduze imizimba amanzi. Indlu Kufanele ngizame nokuzala zonke izimo ukuthi sesiseduze endaweni yazo yemvelo.
Izingadi Russian cinquefoil ezivamile Nepal. Ngiyajabula ukuthi kusukela ekuqaleni kuka-July no-cishe kuze kube sekupheleni kuka-August, obomvu noma izimbali amnyama-pink. Kukhona izinhlobo ezimbili: "Nkosazana Wilmotte" futhi "Floris". Lena nzalo enhle kakhulu, inflorescences ukunakwa okunethezeka. Futhi okudume kakhulu cinquefoil izihlahlana ezingasetshenziswa ukubekezelela ukugunda izinwele, imibala egqamile ujabule, umuzwa omkhulu egqumeni alpine. Lolu hlobo isetshenziselwe ukudala Hedges. Potentilla kwesiliva futhi ngezinye izikhathi atholakala izingadi, it has a encane kakhulu izimbali ukukhanya yellow. Kodwa ukubaluleka kwalo akukho leso sikhalo, ngakho amandla okwelapha izitshalo.
Into enzima kakhulu - ukuthola indawo lapho ubanjwe bloodroot. Ukutshala nokunakekela adinga ukuvundiswa gqwa, Ukukhipha futhi ayakhala nokhula. Imbali uthanda ilanga, kodwa ngesikhathi esifanayo ngaphansi imisebe ngqo luphola futhi buyabuna. Emthunzini likhula kancane kakhulu futhi awukwazi eziqhakaza, ngakho cinquefoil amasudi penumbra. I nzima kakhulu ukuba alandise Florists nge cinquefoil pink, ngoba liyisihlalo ezingezwakali kakhulu. Lezi izinhlobo zikhula kahle ezindaweni efudumele.
Etshalwe for isitshalo unomphela kangcono kakhulu entwasahlobo. Ukuze wenze lokhu, wemba cishe kwesigamu imitha ukujula. Njengoba bloodroot uthanda calcium, kufanele wafaka abakhwabanisi amatshe e-limestone. Khona-ke wathela ungqimba elincane emhlabeni nge humus nesihlabathi, ibekwe yisithombo futhi wambozwa inhlabathi asele. Inhlabathi kumele ugcwalise kahle, ngoba uyakuthanda kakhulu umswakama bloodroot. Ukutshala futhi Care ukuthambisa njalo, ukugwema omiswe umhlabathi akukwazi kunoma isiphi isimo. Kuyadingeka ukuba banakekele umqhele zalesi sihlahla, cut yayo njalo ngonyaka. Le nqubo kangcono entwasahlobo cinquefoil uma abalimalanga. Ukwakha isihlahla uqweqwe izimbali, kuwufanele wonke uzuza ngoba ngonyaka usike ngumuntu wesithathu. Futhi ungakhohlwa mayelana nesicelo kukamanyolo amaminerali kanye Ukuhlakula ukhula.
Amakhowe tolkachiki: amathiphu ebalulekile amakhowe pickers
"Squirrel" (isibhamu): incazelo, izici, ukulinganisa
Esifanekisweni eliphakeme kunawo wonke emhlabeni ... Kuyini?
Isifundo esiwusizo kwabesifazane abakhulelwe yizo zokuzivocavoca, i-yoga, i-aqua aerobics
Indlela ukuqeda amaqhubu phezu imilenze ngendlela esifike ngesikhathi?
"Sulphate Gentamicin": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Rhone River: incazelo, izici, izithombe
Klodett Kolber: Biography, ama-movie, izithombe